ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး: ကရင်ဒုက္ခသည်များအား ဌာနေပြန်ပို့မှု ပို့သူတွင် တာဝန်ရှိဟု ကေအန်ယူ ပြောကြား
+ "ကျနော်တို့ နောက်ထပ် စခန်းတွေ အများကြီး ထပ်ဆောက်မယ်၊ ဆက်တိုက်ရမယ် ဆိုရင်လဲ နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ ဆက်တိုက်မယ်"
2750 Karen New Years In Korea
ကရင်အမျိုးသား မိတ်သဟာယအဖွဲ့ (ကိုးရီးယား)
တောင်ပေါ်ကရင် မျိုး နွယ်စု
ကရင်ဒုက္ခသည်များအား ဌာနေပြန်ပို့မှု ပို့သူတွင် တာဝန်ရှိဟု ကေအန်ယူ ပြောကြား
ရဲရင့် / ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
အဖွဲ့အစည်းတခုခုက ဒုက္ခသည်များကို အကျပ်ကိုင်ပြီး ပြန်ပို့သည့်အတွက် ဆိုးဝါးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အဓမ္မပြန်ပို့သည့် အဖွဲ့ကသာ လုံးဝတာဝန်ယူရမည်ဟု ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) က ယနေ့ပြောကြားလိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထာ့ဆောင်ရမ်းမြို့နယ်တွင် ခိုလှုံနေသည့် ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်မှ ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် (၃) ထောင်ကျော်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မနက်ဖြန်တွင်ပြန်ပို့မည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကေအန်ယူက ဖေဖော်ဝါရီ (၄) ရက် နေ့စွဲဖြင့် သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ကာ ကန့်ကွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်က “အခုပြန်ပို့မယ့် အစီအစဉ်က ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအဓမ္မ ပြန်ပို့မယ့် အနေအထားဖြစ်နေတာကြောင့် ကေအန်ယူက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အရင် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ကြေညာချက်အတိုင်းပဲ။ အခုလည်း ဒုက္ခသည်တွေကို အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့မယ့်ကိစ္စကို ကေအန်ယူက လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာမီဒီယာအချို့တွင် ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီကေဘီအေနှင့် ကေအန်ယူ ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည့် သဘောမျိုး ရေးသားထုတ်လွှင့်ကြကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းထုတ်လွှင့်မှုများမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ ကေအန်ယူသည် အဖွဲ့ပေါ်လစီအတိုင်း ရပ်တည်ကြောင်းနှင့် အများသိရှိနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့သဘောထားကို ထပ်မံတင်ပြပြီး ကန့်ကွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်က ဒုက္ခသည်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကေအန်ယူက ထုတ်ပြန်ထားသည့် သဘောထားကြေညာချက်များထဲတွင် မြန်မာပြည်အတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ပြေလည်မှုနှင့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေး မရရှိသေးသရွေ့ ဒုက္ခသည်များကို နေရင်းရပ်ရွာသို့ လည်းကောင်း၊ နအဖနှင့်၎င်းတို့၏ လက်အောက်ခံတခုခု၏ တပ်စခန်းတွင်လည်းကောင်း အဓမ္မပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုများကို ကေအန်ယူက ကန့်ကွက်သည်ဟု ကြေညာထားသည်။
လုံခြုံမှု စားဝတ်နေရေးအတွက် ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာ၊ အန်ဂျီအိုနှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်များက ဒုက္ခသည်များကို စောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းတခုခုက ဒုက္ခသည်များကို အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့သည့်အတွက် ဆိုးဝါးသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ပြန်ပို့သည့်အဖွဲ့ကသာ တာဝန်ယူရမည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
ထာ့ဆောင်ရန်းမြို့နယ်တွင် ခိုလှုံနေသည့် ကရင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် (၃) ထောင်ကျော်သည် ယမန်နှစ် ဇွန်လတွင် ဒီကေဘီအေ၊ နအဖ ပူးပေါင်းတပ်နှင့် ကေအန်ယူတပ်ဖွဲ့တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရက်ရှည်တိုက်ပွဲကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ထာ့ဆောင်ရန်း မြို့နယ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာကြသူများဖြစ်သည်။
အဆိုပါစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်က မနက်ဖြန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့မှစတင်ကာ မြန်မာဘက်သို့ အပြီးပြန်ကြရမည်ဟု အမိန့်ပေးထားကြောင်း ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်အရေး ဆောင်ရွက်နေသူတဦးက “မနက်ဖြန် (၇) နာရီကစပြီး ဒေသလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ ထိုင်းစစ်တပ် (ထာ့ဟန်ဖန်း) အဖွဲ့က နောင်ဘိုးစခန်းမှာရှိတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အိမ်ထောင်စု (၃၀) ကို အရင်စပို့မှာဖြစ်တယ်။ မပြန်ချင်လည်း အတင်းမောင်း ပြန်တော့ ဒုက္ခသည်တွေလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
Posted by KYO(KOREA) at 8:27 AM
+ခါန်.ခေါဟ်စ၀်ဘဦးကြီး ဆ်ုခႜါင်(ှ)ထီး+>>>> +ခိႜုဝ်လင်စူးဖံင်းဆ်ုခႜါင် လ၀်္ဘးလ်ုဃျေဝ်+ +For us surrender is out of question+ (ခိႜုဝ်လင်စူးဖံင်းဆ်ုခႜါင်လ၀်္ဘးလ်ုဃျေဝ်)လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်း အလျှင်းမပြောရ +ပ်စူးဖံင်းမ်္ဘုးအ်ှလ်ုပ်ုစူးဖိုင်+ +We shall retain our arm+(ပ်စူးဖံင်းမ်္ဘုးအ်ှလ်ုပ်ုစူးဖိုင်)ကရင့်လက်နက် ကရင်တွေကိုင်ထားရမယ် ပ်ုဖႜုံထီခါန်မ်္ဘုးသေ်ှယာ်ၟပါကဲ+ +The recognition of Karen State must be complete+ (ပ်ုဖႜုံထီခါန်မ်္ဘုးသေ်ှယာ်ၟပါကဲ)ကရင်ပြည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံရမည် +ပ်ုဖံႜုဆိုဒ်မ်္ဘုးအင်းတါင်ဟ်္ဘုံးဟ်ုဌာန်.ဍ္ဍးဝေး+ +We shall decide our own political destiny+(ပ်ုဖံႜုဆိုဒ်မ်္ဘုးအင်းတါင်ဟ်္ဘုံးဟ်ုဌာန်.ဍ္ဍးဝေး)ကရင့်ကျမ္မာ ကရင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်
က၇င်နေ.ထူးနေ.မြတ်များ ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ပြာသိုလဆန်း(1)၇က်နေ. ကရင်တော်လှန်ရေးနေ. ဇန်န၀ါ၇ီလ(31)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့ဖေဖော်ဝါ၇ီလ(5)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားနေ့ဖေဖော်ဝါ၇ီလ(11)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနေ. ဧပြီလ(5)၇က်နေ. ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနေ. မေလ(23)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နေ. ဂျုလိုင်(5)၇က်နေ. ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေး တပ်မတော်နေ. ဂျုလိုင်(16)၇က်နေ. ကရင့်အာဇာနည်နေ. သြဂုတ်လ(12)၇က်နေ. ကရင်ချည်ဖြူဖွဲ. (လက်ချည်ပွဲ)နေ. ၀ါခေါင်လပြည့်နေ.
IDP(karen internally Displace People) (1)
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ. သ၀ဏ်လွှာ (1)
ပြည်ပရောက် ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် (1)
လူငယ်များ၏ စကားလက်ဆောင် (1)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကရင်ချည်ဖြူဖွဲ.မင်္ဂလာဓာတ်ပုံများ (1)
Post အားလုံးတပြိုင်ထဲဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်(Click Here)»»
ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး © 2008. Free Blogspot Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute